Dhijitari Kushambadzira zvikanganiso zvekudzivirira mu2019 - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Dhijitari Kushambadzira zvikanganiso zvekudzivirira mu2019
Digital Marketing inowanzo shanduka, uye nekuda kweichi chinangwa, zvakakosha kuita zvikanganiso. Kugara uchiziva zvezvinoitika zvechinyakare kunogona kuita kunetesa nguva nenguva uye kunogona kukonzera kukundikana. Nyaya chaiyo iri mukusakwanisa kutsiva nguva yakarasika nezvikanganiso. Iwe unogona kazhinji kudzidza kubva digital advertising zvikanganiso zvekuchengetedza chinhambwe kubva kwavari.
Sezvo isu tave kupinda mu2019, iwo mukana wakanaka wekufunga zvakare yako digital advertising matekiniki, uye vimbisa kuti zano rako riri nyowani uye rinoshanda kune yako bhizimisi.
Heano epamusoro akajairika digital advertising zvikanganiso zvaunofanira kufunga usati waronga maitiro ako:
1. Kwete kutsanangura chinangwa chako
Kunzwisisa chinangwa chako kwakakosha kuti uwane chero digital advertising kushanda nesimba. Kunyangwe iwe uchiziva imwe yakakosha data nezve ako vatengi senge huwandu hwevanhu kana zvaunofarira, hazvireve kuti unozvinzwisisa.
Iwe unofanirwa kugadzira manuter manas, ayo ari ekufungidzira maficha eako mutengi mutengi. Izvi zvinopfuura zvakapfuura pamusoro penzvimbo, nekutarisa zvinopesana uye zvinokurudzira. Kugadzira uye kuchengeta mutengi manas ibasa rekushinga zvisinei rakapembedzwa, kunyangwe paine dambudziko.
Kana iwe ukasatsanangura chako chakanangwa nenzira kwayo, vatengi vanozoona kuti hauna ruzivo rwezvavanoda kana kutarisira. Semuenzaniso, kana iwe ukamisa nguvo dzemakushe kune vanhu vanogara munzvimbo dzinopisa asi zvingave zvichibatsira zvakanyanya kunongedza avo vanogara munzvimbo dzinotonhora. Nekudaro, iyo mhando yekutarisisa yakajeka ingangoitika kana iwe uine yakawanda kwazvo yakagadzirwa mutengi persona set. Shandisa izvozvo kukanganisa waunonangisa uye kupi.
2. Kufungisisa vatengi vatsva uye kuregeredza zviripo
Masangano mazhinji anotarisisa pakuwedzera kuwedzera kwevatengi kwavanofuratira izvo zvazvino. Iwe semuzvinabhizimusi unofanirwa kugadzirisa izvi nekucheka gutsikana kune vatengi vako vemazuva ano zvakare.
Zvakanaka kuti urikushanda kuunza vatengi vatsva asi nekukanda chinhu icho kumutengi wako aripo zviri pachena kuti ane mari. Sei?
Sezvo iwe watogadzira kubatana kwakanaka navo uye iyi ndiyo imwe yenzira dzekugara mupfungwa dzavo maererano nekutenga online.
Unogona kuzviita nekugovana chimwe chinhu gutsikana zvakagadzirirwa kunyanya kwavari kana nekuvapa mapurogiramu ekuvimbika achivakurudzira kutenga imwe. Ungangodawo kuratidza chiitiko chekutenga chakabatana chavaive nacho pakutanga. Imwe nzira yekusimudzira hukama hwenyu ndeyekutumira zvakagadzirirwa zuva rekuzvarwa zvinopihwa.
Iwe unogona zvakare kuvasvikira pakuongorora kwavo kwekutenga nekara rako. Iwe unogona kutovanyorera ivo kwekutumira uye kuvapa iwo chirongwa chehunhengo.
3. Kwete kugadzirisa yako saiti nhare
Kukwidzika kwemafoni efoni mune zvese kubhurawuza nekutenga zvigadzirwa pamhepo zvinojekesa kuti nei Google irizvino ichipa ukuru hweSEO kumasosi akagadzirirwa mafoni.
Iine ese maviri mawebhu indexes uye wenguva dzose vatengi vari kuda izvo zvakanaka zviitiko zvevashandisi pamafoni avo, mabhureki anotevera pane izvi digital advertising modhi zvirokwazvo ichatora simba rekumisidzana nevanopikisana navo, uye avo havazoite chikanganiso chikuru kuwira pasi.
4. Kwete kupindura vatengi vako
Vanhu vazhinji vanoshandisa online Mapuratifomu kuti vawane mhinduro kubva kumhando dzavo dzekutengesa. Vanhu vanozo commenter pane zvaunotumira pa evanhu vezvenhau migero zvine chekuita nemushandirapamwe wako. Panogona kunge paine mibvunzo yaunofanirwa kupindura nekukasira.
Zvakare, vateveri vemunhu vanoona mhinduro yako uye vachidzoka sarudzo yavo yekuti vobatana newe here kana kwete uchifunga mabatiro aunoita avo vavanoziva. Muchiitiko chekuti iwe ukasapindura kana kupindura zvisina kukodzera, mhedzisiro yakatopfuura munhu iyeye.
Saka, zvirinani, bata zvichemo pa evanhu vezvenhau neruremekedzo rwakaenzana kubva kune--munhu kushoropodza. Edza kuona nyaya uye ramba uri mutsamba nguva dzose nevatengi vako.
5. Akawandisa mabhizinesi profiles
Kana iwe uri kutarisira kuwedzera kusvika kwako nekuita zvakasiyana bhizimisi profiles kana mapeji pane yega yega online networking chiteshi, uri kungovhiringa vatengi vako uye kutambisa zviwanikwa zvako nenguva zvese.
Sarudza, bekesa yega yega yezvaunoedza kuita kutenderera imwe profil iyo inotaurira zvese nezve chako chiratidzo, saka vateveri vanogona pasina kunetseka kukuru kukuwana iwe uye uzive nezveako mhando.
Munyika yakakwana, iwe unoda imwechete mbiri kune yega inokosha evanhu vezvenhau chiteshi, panguva iyoyo inoshandura mameseji ako akatarisana nezvinodiwa nepuratifomu yemhedzisiro yakakosha.
6. Kusina iyo chaiyo yezvinyorwa zano
Kana iwe uri kunyanya kugovera gutsikana uchifungidzira kuti ichanatsiridza zvimiro zvako pane injini dzekutsvaga pasina kazhinji kuseta a content marketing strategy - kukanganisa zvakare!
Vateereri vako vanonangwa vanowanzo kufuratira zvakashata zvinyorwa zvakatakurwa nemazwi akakosha. Kuva neyakarurama digital advertising zano rako gutsikana zvinoreva kuziva kuti sei uchidhinda zvakananga gutsikana, wauri kunanga paari, uye chii chinotarisirwa mhedzisiro.
Iwe unofanirwa kuisa pfungwa zvakanyanya pakupa kwakakodzera uye kwakadzama gutsikana pane kunyora zvisina musoro.
Saka, iwe unofanirwa kutarisa pakupa mhinduro kumatambudziko evatengi kukwevera vateereri vakawanda. Create gutsikana izvo zvinogutsa zvinangwa zvako uye zvinotarisirwa nevaverengi zvakafanana. Nehungwaru isa mazwi akakosha kupa kukosha kune vaverengi vako pamwe nekuisa iyo yepamusoro. Unogona kuzotanga kugovera gutsikana on evanhu vezvenhau Mapuratifomu kuitira kuti mutengi asvike.
7. Kutengesa email zvisina tsarukano
Email marketing tactic ichiri pakati peinopa mubayiro digital advertising strategy. Kana ikaitwa nenzira kwayo, inotsiva hukuru hwevashandisi kuita uye kutengesa. Vamwe vanoiparadza nekushandisa inopedza-kufa inonetesa kana mitsetse isina musoro.
Imwe email gutsikana inotungamira zvakawanda pazvideredzwa uye zvibvumirano sekunge zvinomanikidza vaverengi kutenga chimwe chinhu. Saka, iwe unofanirwa kugadzira maemail ako kune zvinodiwa uye zvinodikanwa zvevatengi vako. Zvikasadaro, iwe unongokanganisa chimiro chako chemhando.
8. Kuwedzeredza-kushandisa paFacebook neGoogle kushambadzira
Mazhinji masangano matsva anodyara mari yakawanda muFacebook kana kushambadzira kweGoogle, achitenda kuti ndiyo mhinduro isinganzwisisike yekuvawanira nhamba yakati wandei yevatengi vatsva uye kuwedzera kwavo. bhizimisi, kuti vakwanise kuwana mhedzisiro ye zero uye kubata ivo vapambadza mari yakawanda.
Mukutaura kwese, isu sevazhinji tinoona kuti vatengi vanovenga kushambadza. Panzvimbo pokutambisa mari kuvimba kuti mumwe munhu anozoona kukwidziridzwa kwesangano rako pawebhu uye kuritora, unofanirwa kuisa mari yako nenguva kupa chimwe chinokurudzira kutarisiro yako mukudzoka kwekufunga kwavo.
Munyika iyoyo gutsikana-nosundwa, kupa gutsikana Chakakosha, chinokwezva, uye chinobatika ndicho chinhu chaunofanira kuisa pfungwa pachiri, kwete kuti ndezvipi zvinoonekwa zvaunogona kugamuchira pachiziviso chetsika.
9. Kufuratira kushambadzira kwevhidhiyo pasocial media
Mavhidhiyo ari evanhu vezvenhau yechinangwa chekushambadzira ine basa rakasarudzika mukuwana sarudzo dzevatengi. Ivo vane hukuru hunogona pano uye kuvadzinga haisi zvachose kufunga kwakangwara.
Uyezve, munhu haafanire kushandisa mari yakawanda kugadzira mavhidhiyo anogutsa pane izvi evanhu vezvenhau Mapuratifomu. Mazhinji mafoni ane anoshamisa kamera mabasa uye kugadzira mavhidhiyo ehupenyu chaihwo ane mukurumbira zvakakwana kuita zvinokanganisa. Zvisineyi, kutarisirwa kunofanirwa kupihwa kuti usatumire mavhidhiyo asina kunaka kana asina kujeka, kana asina chero pfungwa.
Mugore ra2019, vhidhiyo yacho ingangoenda kunomiririra 80% yewebhu traffic. Nenzira iyi, zvakakodzera kuti chero mushambadzi wedhijitari agare kure nechikanganiso chekusaisa zviwanikwa mumavhidhiyo emakampeni avo ekutengesa.
10. Kutarisa analytics
Midziyo yakadai seSEMrush kana Google Analytics zvakakosha kuti uwane wongororo pane zviri kushanda uye zvisiri. Masangano mazhinji anoita chikanganiso chikuru nekuita evanhu vezvenhau zvinyorwa kana mablogiki pasina kuongorora kuita.
Iwe unogona kujairana nezvakawanda pamusoro peavo vangangove vatengi kubva kune kamwe chete positi nekuona kuti vanhu vari kudhirowa sei neyako yakapihwa data. Chinhu chakanaka chinogona kuve iyo nhamba yekubatanidzwa, semuenzaniso, kufarira, makomendi, kudzokorora uye zvichingodaro.
Analytics yesaiti yako inogona kukupa kudzidza kwakadzikama uye rutsigiro mukutarisa mukati gutsikana. Uyezve, analytics inogona kushandiswa kuona kuti zvakabudirira sei gutsikana iri kusangana nevaoni vako. Iwe unofanirwa kushandisa ruzivo rwakaunganidzwa kubva mukuferefeta kune mukana wako uye nekusimudzira yako yekusvika pamhepo.
11. Kutarisira mhedzisiro yehusiku
Dzimwe dzenguva mabhizinesi anozofunga kuti tech inokura nekukurumidza zvekuti digital advertising nhamburiko dzinoitirwa kuunza zvibereko nokukurumidza zvikuru. Pamusoro pazvo, kana vasingaone zvinobuda nekukurumidza, vanotya votora nhanho kumashure.
Isu tajaira kuti zvinhu zviri kuitika nekukurumidza kupfuura zvazvaimboita semugumisiro wekuwana kushoma kwatinako; zvisinei, ichi ichokwadi. Nepo nyika yekombuta ichishanduka nekukurumidza, chinangwa chako ndechevanhu, uye vanhu vanotora nguva kuvharirwa mukati zvechokwadi. Nekuda kwealgorithms (uye kusandura kwavo kuchinjika), rangarira kuti vateereri vangangotadza kuona yako gutsikana paunotanga kuitumira.
Saka, kuwirirana ndiyo nzira yekubereka zvibereko digital advertising. Zvinowanzo tora akasiyana mapoinzi emharidzo asati angangoita mutengi auya nema ads akakodzera kana gutsikana.
Vanoda rubatsiro neako digital advertising strategy? Batana.